Coronavirus: "Waxaan ka baqayaa in aan baahi u dhinto Covid-19 kahor" - BBC News Somali
Coronavirus: "Waxaan ka baqayaa in aan baahi u dhinto Covid-19 kahor"
26 Maarso 2020
Image caption Cali xassan ma heysto lacag uu raashin ku iibsado, maadaam la xiray dukaankii uu ka shaqeynayay
Dowladda Hindiya ayaa gebi ahaanba bandow habeen iyo maalin kusoo rogtay guud ahaan dalkaas, si loo yareeyo faafidda xanuunka corona.
Hindiya oo ay ku nool yihiin dad gaaraya 1.3 bilyan oo qof ayaa dowladda waxay ku amartay in ay guryahooda ku nagaadaan, waxaana la xiray dhammaan goobaha ganacsiga, waxbarashada, cibaadada, garoomada iyo xafiisyada dowladda.
Arrintan waxaa ay aad u saameysay dad badan oo fuqaro ah, kuwaas oo ku noolaa hadba waxa ay shgaqeystaan maalintaas.
Ganacsatada yaryar iyo dadka garab-raratada ah ayaa sheegay in aysan heysanin wax ay ku noolaadaan, maadaama waxa ay maalintii quutaan ay ka helin jireen shaqooyiinka ay markaas qabtaan.
Ramesh Kumar, oo ah muwaadin u dhashay Hindiya ayaa BBC-da u sheegay in isaga iyo qoyskiisa ay ku noolaayeen waxa uu maalintaas soo shaqeeyo, haatanna aysan jirin meel uu ka shaqeeyo, maadaam meelwalba la xiray.
"Waxaan maalintii heli jiray sideed doollar, qoyskeygana wuxuu ka kooban yahay shan qof oo aan aniga u shaqeeyo, waan ogahay khatarta fayraska corona balse ma daawan karo caruurteyda oo baahan," ayuu yiri Ramesh.
Sidoo kale Maxamed Sabir, oo ah ganacsade leh dukaan yar oo lagu iibiyo caana-garoor oo ku yaala caasimadda Delhi, ayaa sheegay in dhawaan uu shaqaaleysiiyay laba qof, si uu uga faa'ideysto xilliyada xagaaga oo uu dhaqaale fiican u sameeyo.
"Hadda wax mushaar ah ma siin karo oo lacag uma hayo, qoyskeena waxaa ay dhaqaale ka heli jireen beeraha iyo dalagyada, balse dalagyadii way halaabeen sannadkan, waxayna iga sugayaan in aan aniga masruufo, waxaan dareemayaa in aysan jirin cid i caawineysa, waxaana ka cabsi qabaa in corona kahor an baahi u dhimano," ayuu yiri Maxamed.
Image caption Maxamed Sabir
Malaayiin xoogsata ah oo ku nool dalka Hindiya ayay xaaladda ku xumaatay, kadib markii ra'iisul wasaraaha dalkaas, Narendra Modi uu talaadadii ku dawaaqay bandow habeen iyo maalin ah, waxaana dalkaas laga soo sheegay 500 oo kiis oo xanuunka corona, halka 10 qofna ay u dhinteen.
Dad badan ayaa sheegay in aysan heysanin wax ay cunaan, maadaama aysan jirin meel ay ka shaqeystaan oo xaaladda wadanka ay isbadeshay.
Dowladda uu hogaamiyo ra'iisul wasaare Narendra Modi iyo barasaabyada gobolo badan oo ku yaala dalkaas ayaa ballanqadaay in taageero dhaqaale siin doonaan dadka danyarta ah ee aan awoodin in ay nolosha sii wataan inta lagu guda jiro marxaladdan.
Hey'adda shaqalaaha adduunka ee ILO ayaa sheegtay in boqolkiiba 90 dadka ka shaqeeya Hindiya ay yihiin kuwa ka shaqeysta shaqooyin hoose.
Intooda badan dadkaas ayay hey'addu sheegtay in aysan laheyn xuquuq sida lacagta la siiyo dadka hawlgabka ah, fasaxyada qofka marka uu xanuunsado iyo ceymis.
Cudurka Coronavirus wuxuu weli fara ba,an ku hayaa 5-ta qaradood ee caalamka.
Xoghayaha guud Qaramada Midoobay ayaa ku tilmaamay fayraska Corona in uu yahay mid halis ku ah aadanaha, islamarkana ay tahay in bina'adamku dhammaan ay la dagaalamaan.
Antonio Guterres ayaa carabka ku adkeyay in jawaabta uu bixiyo hal dal aysan ku filnayn la dagaalanka cudurka islamarkana ay muhim tahay in la isu garabsado.
Wuxuu khudbad ka jeedinayay kulan xarigga looga jarayay lacag gaareysa balaayiin doollar oo loogu talagalay in lagu kaabo dalalka u nugul cudurkan, kuwaasi oo aan xitaa heli Karin adeega asaasiga ah ee caafimaadka.
Hay'adda Caafimaadka Adduunka (WHO) ayaa dhankeeda sheegtay baahidda loo qabo in cudurkan baaritaankiisa iyo karantiilka dadka uu haleelo la sii xoojiyo.
Dalka Mareykanka waxaa imika la xaqiijiyay guud ahaan dalkaasi in ka badan 60,000 oo kiis islamarkana kala bar kiisaskaasi waxaa laga helay magaalada New York.
Spain waxaa imika la diiwaangaliyay tiradii ugu badneyd ee u dhimatay corona, waxayna noqotay dalka labaad ee dadka ugu badan ay ku dhinteen, taas oo ka sare marisay Shiinaha.
Xukuumadda Madrid ayaa sheegtay in tirada dhimashada ay mareyso in ka badan 3, 400 oo qof.
Cimilada kulul ma dili kartaa coronavirus?
Nin u dhintay dawo uu u liqay ka hortagga coronavirus
Coronavirus: Dagaalka aan muuqan ee u dhaxeeya Mareykanka iyo Shiinaha
24 Maarso 2020
Coronavirus: Sida wararka beenta u faafaan
Coronavirus: Maxay tahay faa'idada adduunka uu ka dhaxlay?